Ngwọta CRM dị oke ọnụ | CRM maka azụmahịa gị | Nwere ike ịba uru na nke kachasị mma maka obere azụmahịa na nnukwu azụmahịa.
CRM SOLUTIONS maka ndị ahịa anyị
Nkwekọrịta CRM kachasị mma
Ihe I nwetara:
A na-akpọ oku niile n'otu ebe
Nlele elekere 24
Azịza akpaghị aka na nlekota
Ngwọta anyị gụnyere
Dabere na nhazi ụlọ ọrụ gị na ntinye uche anyị anyị na-enye ngwugwu Ngwọta CRM ma n'otu oge ahụ anyị na-enyekwa Ngwọta CRM ahaziri ahazi.
Nhazi oru na oru
Ndị otu gị ga-enwe ike ịmepụta ebe ọrụ na ozi niile dị na etiti. Ha nwere ike mepụta onwe ha ma ọ bụ ndị ọzọ. Ndị njikwa ga-enwe ike ịnweta akụkọ maka ọkwa niile.
Ndị otu gị na ndị ahịa gị ga-enwe ike ịkparịta ụka site na ozi-e mana ha ga-enwe ike ịkparịta ụka site na netwọ mgbasa ozi Social Social kachasị mma. Niile n'otu ebe.
Nkata ụlọ ọrụ, Nkata nkata & Oku vidiyo
Ga-enwe ike ịmepụta ọwa, otu na mkparịta ụka na-eme ka mmekọrịta dị n'etiti nzukọ yana gị na ndị ahịa gị.
Nwere ike ịnwe akwụkwọ n'otu ebe ka ha wee dị n'etiti ndị otu gị ma nwee ike ịkekọrịta ya na pịa bọtịnụ ndị ahịa gị.
Nchekwa faịlị, Edezi & Njikwa
Site na iji igwe ojii, ị ga-enwe ohere iji kwado ma chekwaa faịlị gị na gburugburu igwe ojii nwere nchekwa. Enwere ike idozi nsogbu n'ime akụrụngwa nke gị yana kwa site na ụzọ nnabata igwe ojii.
Kalenda na nhazi
Ha niile n’otu sistemu. Ọ nwere ike iguzo ya naanị ma ọ bụ na Kalịnda Google ma ọ bụ Microsoft Outlook.
Enwere ike itinye CRM na Google Mail, Microsoft Exchange ma ọ bụ SMTP ma ọ bụ savaịk ọ bụla POP, nke a na-agbanwe na Ndu na CRM.
Ngwọta Center Kpọtụrụ
Ihe ngwugwu CRM dị ukwuu maka Contactlọ Ọrụ kọntaktị nke kwesịrị ekwesị maka njikwa mmekọrịta na nkwado ngalaba ahịa. Mepụta akụkọ, ụlọ ahịa azụmaahịa, akwụkwọ ọnụahịa, ọgbọ tiketi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọrụ ekwentị Telefon na PBX
Ọpụpụ na oku mbata site na desktọpụ gị ma ọ bụ site na SIP-fon ma ọ bụ ekwentị gị. You nwere ike ịkpọ oku gaa na ekwentị ma ọ bụ ala ala n'ụwa niile na ọnụ ala dị oke ọnụ.
Ngwá ọrụ dịgasị iche iche iji kwado Ngalaba Na-ahụ Maka Resourcesba Ọrụ Gị, yana ọtụtụ arụ ọrụ dịka; Ga, ịrịọ na inye onyinye, nkwupụta mmefu, mgbakọ ụgwọ iji kpọọ ole na ole.
Enwere ike ịjikọ Ngwọta CRM ozugbo na weebụsaịtị gị maka nkwado ndị ahịa na nke ọgbọ.
Quotto na Invoice Generation
Gị na ndị otu gị nwere ike iwepụta Quotes na akwụkwọ ọnụahịa ozugbo site na CRM gị, nke na-eme ka ndụ dịkwuo mfe karịa ma e jiri ya tụnyere usoro ọdịnala.
I nwere onwe gị ịnye onye ahịa gị usoro ihe siri ike iji dezie ma dekọ ma na-edekọ arịrịọ ndị ahịa na-arịọ ma nyekwa nsogbu na-enweghị nsogbu ọ bụla.